Samson, saka lehibe indrindra any New York | Noti saka
Samson, saka lehibe indrindra any New York
Voalaza matetika momba an'i New York fa lehibe dia lehibe ny zava-drehetra. Goavana ny tanàna, mazàna koa ny lovia sakafo ... Eto, toy ny any amin'ny toerana hafa, dia miaina mankafy ny saka be ny olona ka manaparitaka azy ireo ... mety ho be loatra, na dia azo antoka aza fa raha miresaka ireto kitties ireto dia mety lazao anay fa faly izy ireo amin'ny fiheverana omenay azy ireo, toa Samson.
Samson dia fantatra amin'ny hoe saka lehibe indrindra any New York. Maine Coon tsara vintana izy izay milanja tsy mihoatra ny 13 kilao, ary izany dia mahalasa adala ny fianakaviany (am-pitiavana).
Ilay mpandray anjara mavitrika Volo volom-bolo izay manodidina ny 1,20 metatra ny halavany izay mipetraka any New York miaraka amin'i Jonathan Zurbel mivady. Mifanohitra amin'izay mety ho izy, dia tsy biby matavy na matavy loatra. Matanjaka sy hozatra ny vatany, izay nanampy ny toetrany tsara sy tsara fanahy, nahatonga azy ho »saka nofy», Araka ny nolazain'i Zurbel taminy Love meow.
Izy io no saka lehibe indrindra any New York, saingy mety ho izy no lehibe indrindra manerantany amin'ny halavany, satria 1,23 metatra ny firaketana ankehitriny. Ny zavatra fantatsika hatreto dia izany ny tarehiny maditra dia tsy hita taratra amin'ny fihetsiny. Miteny ho azy ireo sary…
Samsona lehibe noho ny lynx amerikana. Tsy isalasalana fa ny matory miaraka aminy dia tsy maintsy ho fifaliana, indrindra amin'ny ririnina 😉. Ny fianakavianao no milaza an'izany tsara toetra izy, izay tsy mahagaga ahy. Hita fa mpidoroka saka izy ireo, satria mety mihoatra ny iray isika.
Fantatrao ve ny tantaran'i Samsona? Ity feline ity na dia tany New York aza dia nahazo ny fon'ny olona maro manerantany. Manantena aho fa hanohy hiaina sambatra miaraka amin'ny fianakavianao mandritra ny taona maro sy maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » About us » Samson, saka lehibe indrindra any New York
Ahoana ny fomba hampandehanana saka saka
Ahoana ny fomba hiarovana ny hazo krismasy amin'ny saka